Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 03:040comments
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြဿနာသည် ဘာသာရေး ပဋိပက္ခမဟုတ်ကြောင်းနှင့် လူမျိုးသုဉ်း သတ်ဖြတ်မှုများ မရှိကြောင်း ကမ္ဘာတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အများဆုံးရှိရာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ပြောကြား
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြဿနာသည် ဘာသာရေး ပဋိပက္ခမဟုတ်ကြောင်း နှင့် လူမျိုးသုဉ်း သတ်ဖြတ်မှုများ မရှိကြောင်း ကမ္ဘာတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အများဆုံးရှိရာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဆူဆီလိုဘန်ဘမ်း ယူဒိုယူနိုက သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
''မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းများ ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး လုပ်ဆောင်မှု အပါအ၀င် ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေး လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ရှိနေပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ မေလနဲ့ ဇွန်လမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေအပြီးမှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုလည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်''ဟု အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ဆူဆီလိုဘန်ဘမ်းယူဒိုယူနိုက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်င်ငံ၊ အနောက်ဂျားဗားရှိ သူ၏နေအိမ်တွင် ကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ဆူဆီလိုဘန်ဘမ်းယူဒိုယူနိုက ရခိုင်- ရိုဟင်ဂျာပြဿနာသည် ဘာသာရေး ပဋိပက္ခမဟုတ်ဘဲ ဒေသတွင်း လူအုပ်စုကြားဖြစ်ပွားသည့် ပဋိပက္ခသာဖြစ်ပြီး ''အကြောင်းတိုက်ဆိုင်၍ ရိုဟင်ဂျာများက မွတ်ဆလင်ဖြစ်ကာ ရခိုင်များက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်နေတာ သာဖြစ်ကြောင်း'' ပြောကြားခဲ့သည်။
လူမျိုးသုဉ်း သတ်ဖြတ်မှုများ ရှိနေသည်ဆိုသည်မှာ မမှန်ကြောင်းနှင့် ''လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာ မရှိပါဘူး''ဟု အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ဆူဆီလိုဘန် ဘမ်းယူဒိုယူနိုက ပြောကြားခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခကို မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ရိုဟင်ဂျာများသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဇာတိဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် မျိုးဆက်လေးဆက် နေထိုင်လာသည့် ၎င်းတို့ကို မြန်မာအစိုးရက တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးထဲတွင် ထည့်သွင်းမှု မရှိသေးကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ဆူဆီလိုဘန်ဘမ်း ယူဒိုယူနိုက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသံရုံးများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများ၊ အိုင်အင်န်ဂျီအိုများအား မြန်မာအစိုးရက ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန(ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)တွင် ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့က ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး အဆိုပါ ရှင်းလင်းပွဲတွင် အင်ဒိုနီးရှားသံအမတ်ကြီးက ရိုဟင်ဂျာများသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများထဲတွင် ပါဝင်မှု ရှိ၊ မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းရာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ''ရိုဟင် ဂျာဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လူမျိုး မဟုတ်ပါဘူးလို့ သမ္မတကြီးက ပြောတဲ့စကားကို ကျွန်တော်ထောက်ခံ ပြောကြားလိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၈၂၄ ခုနှစ် ပထမ-အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီအောက် ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းတွေ အတွက်၊ ကာယလုပ်ငန်းတွေ အတွက် လိုအပ်ချက်ရှိလာတဲ့အခါမှာ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို အတားအဆီးမဲ့ ၀င် လာခဲ့တဲ့အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဗြိတိသျှလက်ထက်မှာရှိခဲ့တဲ့ အစိုးရပြန်တမ်းတွေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ ၁၉၇၃ ခုနှစ်ကကောက်ခဲ့တဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်က ကောက်ခဲ့တဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းတွေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့မှာ ဘယ်တုန်းကမှ လူမျိုးခွဲခြားမှုထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကို တရားဝင် ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးသာ ဖော်ပြထားတာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ တရားဝင် လူမျိုးစုကြီး ရှစ်စုရှိပါတယ်။ ချင်း၊ ကရင်၊ ကချင်၊ ကယား၊ မွန်၊ မြန်မာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး လူမျိုးစု ၁၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ အဲဒီဟာတွေက တရားဝင်လူမျိုးစုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာကော၊ ဗြိတိသျှအစိုးရ ပြန်တမ်းမှာရော ၁၉၇၃ ခုနှစ်က ကောက်ခဲ့တဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ၁၉၈၃ခုနှစ်က ကောက်ခဲ့တဲ့ သန်းခေါင် စာရင်းတွေမှာရော ဘယ်တုန်းကမှ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ရိုဟင်ဂျာသည် ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးထဲမှာပါဝင်တဲ့ လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာမရှိပါဘူးလို့ ဖြေကြားချင်ပါတယ်''ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၌ အဓိကရုဏ်းများကြောင့် ရခိုင်လူမျိုး ၃၁ ဦး၊ ဘင်္ဂါလီ ၄၆ ဦး စုစုပေါင်း ၇၇ဦး သေဆုံးပြီး ၁၁၂ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် စုစုပေါင်း လူနေအိမ် ၄၈၂၂ လုံး၊ ဗလီ ၁၇ လုံး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၁၄ လုံးနှင့် စာသင်ကျောင်း သုံးကျောင်း မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ဝေဖန်သူများက မြန်မာအစိုးရသည် ရခိုင်များကို ဦးစားပေးနေသည်ဟု ဆိုနေပေမယ့် အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ရိုဟင်ဂျာများသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ အကူအညီအထောက်အပံ့ ပိုရနေသည်ဟု ရခိုင်များက သတိမူ သဘောပေါက်ထားကြောင်းလည်း အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ဆူဆီလိုဘန် ဘမ်းယူဒိုယူနိုက ပြောကြားခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ပြဿနာ ဖြေရှင်းရေးအတွက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနေဖြင့် သံတမန်လမ်းကြောင်းက တတ်နိုင်သမျှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံလည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ မျှော်လင့်မှုများပါဝင်သည့်စာကို ပေးပို့ရန် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း ဆူဆီလိုဘန် ဘမ်းယူဒိုယူနိုက ပြောကြားခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး မွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Nahdhatul Ulama ၏ ဥက္ကဋ္ဌ Said Aqil Siradj က အင်ဒိုနီးရှားအများစုအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခသည် ဘာသာရေး အခြေခံပဋိပက္ခဖြစ်သည်ဟု လွဲမှား စွာ ယုံကြည်ထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
'တခြားဘာသာရေး ယုံကြည်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ ရန်စ တွန်းပို့တာ မခံပါနဲ့၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲ တည်ငြိမ်ကြပါလို့ အင်ဒိုနီးရှား မွတ်စလင်တွေ အားလုံးကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံ လိုပါတယ်''ဟု အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး မွတ်စလင် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Nahdhatul Ulama ၏ ဥက္ကဋ္ဌ Said Aqil Siradj က ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 02:480comments
by Yangon Media Group on Monday,6August 2012 at 00:45 ·
ကင်တင်နား၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေသော ရခိုင်အရေးကိစ္စကို အထူးအလေး ပြောဆိုသွားခဲ့ရာ အထက်ဖော်ပြပါအပိုဒ်၌ ရိုဟင်ဂျာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကာကွယ်ဘက်လိုက်ပြောဆိုသွား ခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာမှတ်သားလိုက်ရပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာများကိုစနစ်တကျခွဲခြားနှိမ့်ချဆက်ဆံနေခြင်းများအပေါ်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ကြောင်း ကုလအထူး ကိုယ်စားလှယ်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ထို့အပြင် သူတို့အား နိုင်ငံသားဖြစ်မှုသို့မဟုတ် တရားဝင်တည်ရှိမှု ငြင်းပယ်ခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာသွားလာမှုများကို ကန့်သတ်ခြင်း၊အိမ်ထောင်ပြုမှုကန့်သတ်ခြင်းနှင့် အခြားသော ခွဲခြားနှိမ့်ချဆက်ဆံမူဝါဒများအပေါ် စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ကြောင်း အသေးစိတ်ပါဖော်ပြထားသည်။ထိုမှတစ်ဖန် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီအောင် ၁၉၈၂ခုနှစ် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအက်ဥပဒေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လည်း ကင်တင်နားက တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
ထိုတစ်ပိုဒ်လုံးသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပကတိအခြေအနေနှင့်ကင်းကွာ နေသည့်အပြင် သန်း၆၀လူဦးရေ၏အများစုကြီး၏ လိုလားချက်၊ဆန္ဒများနှင့်လည်း ဆန့်ကျင်နေပေသည်။အထူး သဖြင့် နိုင်ငံတိုင်းသည် မိမိနိုင်ငံ၏ပကတိအခြေအနေ၊သမိုင်းကြောင်း၊ပထ၀ီအနေအထားတို့နှင့်ကိုက်ညီမည့် မိမိနိုင်ငံသားများ၊တိုင်းရင်းသားများအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ပေးရမည့် နိုင်ငံသားဥပဒေများရေးဆွဲပြဌာန်းရ စမြဲဖြစ်သည်ကို ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ကင်တင်နား သိရှိပြီးဖြစ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။
ယင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်းပြကာ တရားမ၀င်ဝင် ရောက်နေသူများအား တရားဝင်ဖြစ်ရေး တိုက်တွန်းပြောကြားသုံးသပ်ခိုင်းမှုကို ကျွန်ုပ်တို့လက်မခံနိုင်ဟု အတိအလင်းပြော ကြားလိုပေသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအပါအ၀င် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများကလည်း နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ကောင်း၊တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသူများအား လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသောအားဖြင့် ဒုက္ခသည်စခန်း ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး ကုလအပါအ၀င်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းက ၀ိုင်းဝန်းကူညီရေးနှုင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း ရှင်းလင်းစွာပြောကြားပြီးဖြစ်သည်။ ထိုပြောကြားချက်များသည်ှအလွန်မျှတမှုရှိပြီး ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် အထူးအရေးကြီးသည့် ရပ်တည်ချက်မှန်လည်း ဖြစ်ပေသည်။မကြာသေးမီက ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတစ်ခုအတွင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦးက နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိစ္စပြောသည့်အခါ လူ့အခွင့်အရေးဆိုပြီး ကဗျာမဆန်ကြရန် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးသွားခဲ့သည်ကို ပြန်လည် ညွှန်းဆိုပြသလိုပေသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် လူ့အခွင့်အရေးကျွမ်းကျင်သူဟုဆိုသည့် ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် ကင်တင်နား၏ ရခိုင်အရေးကိစ္စပြောဆိုသုံးသပ်မှုများသည် သန်း၆၀မျှသော မြန်မာပြည်သူအများစုကြီး၏ ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ပြီး ထိုပြည်သူအများစုကြီး၏ အခွင့်အရေး တစ်နည်းဆိုရသော် မြန်မာပြည်သူအများစုကြီး၏ လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့က လုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် လည်း မျှတစွာသုံးသပ်ပြောဆိုနိုင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအား အသစ်လဲလှယ်ခန့်ထားပေးပါရန် ကျွန်ုပ်တို့ကတောင်းဆိုပါသည်။
(စာပေစိစစ်က ခွင့်ပြုပါက ၇ သြဂုတ်ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြမည်ဖြစ်ပါကြောင်းလေးစားစွာအသိ ပေးအပ်ပါသည်။)
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 00:010comments
Labels: အယ်ဒီတာအာဘော်, ဆောင်းပါး
ကျောက်ဖြူတွင် မီးရှို့ရန် ကြံစည်မူ စွဲချက်ဖြင့် လူတစ်ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
ကျောက်ဖြူမြို့တွင် မီးရှို့ရန် ကြံစည်မူ စွဲချက်ဖြင့် လူတစ်ဦးကို သြဂတ်စ်လ ၄ ရက်နေ့က ရဲက ဖမ်းဆီး လိုက်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူမှာ ကျောက်ဖြူမြို့ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် တစ်ခုဖြစ်သည့် အရာရှိရပ်ကွက် အမှတ် ၄ လမ်းတွင် နေထိုင်သူ ဗလီ ဥက္ကဌ – အဘ ဦးသန်းအောင်၏ သား ဦးသန်းဌေး (ခ) အင်္ဂလိပ်၊ အသက် (၃၈)နှစ် ဆိုသူဖြစ်သည်။
ယခု ဖမ်းဆီးခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တဦး လည်းဖြစ်၊ တရားရုံးချုပ် ရှေ့နေ အငြိမ်းစား တစ်ဦး လည်းဖြစ်သူ ဦးဘရှင်ကို မေးမြန်းရာ သူက ယခုကဲ့သို့ အတည်ပြုပြောကြားသည်။
“ ဗလီ တာဝန်ခံ တစ်ယောက်ကို ဖမ်းထားပြီး တရားစွဲဖို့ စီစဉ်နေတယ် ဆိုတာကို ကြားသိရပါတယ်။ ပြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၃၆၊ ၅၁၁ နဲ့ အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ သတင်းရရှိပါ တယ်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တရား ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၃၆၊ ၅၁၁ တို့က မီးရှို့ဖို့ ကြိုတင် စီစဉ်တဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ တရားစွဲဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေ ပေတံနဲ့ တိုင်းမယ် ဆိုလို့ ရှိရင် အဲဒီလိုဘဲ တရားစွဲရမှာ ဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
ဦးသန်းဌေး (ခ) အင်္ဂလိပ်ကို အရှည် တစ်တောင်ခန့်ရှိသော ထင်းချောင်းများ ပေါ်တွင် ဆီစိမ် အ၀တ် ၄ လက်မခန့် ပတ်ထားသော မီးရှို့ရန် စီစဉ်ထားသည့် ထင်းချောင်း ၁၃ ချောင်း နှင့် အတူ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့သည်ဟု အရာရှိ ရပ်ကွက်မှ လူငယ် တစ်ဦးက ပြောသည်။
“သမ္ဗာန်ချောင်းရပ်ကွက်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အရာရှိ ရပ်ကွက်ကို ဒီလ ၄ ရက်နေ့ နံနက် အစောကြီး ၃ နာရီ လောက်မှာ ဧည့်စာ ရင်းလာစစ်ပါတယ်။ ဧည့်စာရင်း စစ်တဲ့ အခါမှာ သူ့ကို မီးရှို့ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ မီးချောင်း တွေနဲ့ အတူ ဖမ်းမိတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ၄ ရက်နေ့ နေ့လည်မှ စလို့ သိရပါ တယ်။ ကျောက်ဖြူ အရာရှိ ရပ်ကွက်က ဗလီဥက္ကဌပါ။ အခု သူ့ကို အမှတ် ၁ ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ပြီး တရားစွဲဖို့ လုပ်နေပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ယခု အမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျောက်ဖြူမြို့တွင် ပါဝင် ပတ်သက်နိုင်သူများဟု သံသယ ရှိသူ ၁၀ ယောက်ထက် မနည်းကိုလည်း ရဲက ဖမ်းဆီးထားသည် သိရသည်။ သို့သော် အတည် မပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး သေချာစွာ သိရှိနိုင်အောင် နိရဉ္စရာက ကျောက်ဖြူရဲစခန်းကို မေးမြန်းရာ ဖုံးကိုင်သူ ရဲအရာရှိက ခဏကိုင်ထားပါဆိုပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်တော် အခုမှ ဂျူတီ ချိန်းလာတာပါ၊ အဲဒီကိစ္စ မသိရသေးပါဟု ပြောဆိုကာ ဖုံးချသွားခဲ့ပါသည်။ ဖုံးကိုင်ထားစဉ် အတွင်း “ ဟိုကိစ္စမေးနေပါတယ်၊ ဘယ်လို ဖြေကြားလိုက်ရမလဲ” ဟု အထက် တာဝန်ရှိသူကို မေးမြန်းသံများကိုလည်း ဖုံးထဲမှ နိရဉ္စရာမှ ကြားသိ ခဲ့ရပါသည်။
မီးရှို့ရန် ကြံစည်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာက တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း မရှိသဖြင့် ကျောက် ဖြူ ဒေသခံ အကြားတွင် အဆိုပါ ဖမ်းဆီးမူနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးမျိုး သတင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေကာ ကောလဟလ သတင်း များကြောင့် မလိုလားအပ်သော အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ် လာမည်ကိုလည်း အများက စိုးရိမ်နေကြောင်း သိရသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 20:470comments
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများနှင့် ကျောက်ဖြူ လူထု တွေ့ဆုံပွဲတွင် လူထု ချစ်ခင် ယုံကြည်မူက အာဏာထက် ပိုတန်ဖိုးရှိကြောင်း ကိုကိုကြီးမှ ပြောကြား
သြဂတ်စ် (၄) ရက်နေ့ ရန်ကုန် မပြန်မီ ကျောက်ဖြူမြို့တွင် ပြုလုပ်သော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများနှင့် ရခိုင်လူထုတို့ တွေ့ဆုံပွဲ၌ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးမှ လူထု ချစ်ခင် ယုံကြည် လေးစားမူမှာ အာဏာထက် တန်းဖိုးရှိကြောင်း ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး ကျောက်ဖြူလူထု တွေ့ဆုံပွဲတွင် စကား ပြောကြားနေစဉ်( ဓါတ်ပုံ- နိရဉ္စရာ)
သြဂတ်စ် ၄ ရက်နေ့ နံနက် ၇ နာရီခွဲချိန်မှ စတင်ပြီး ၁၁ နာရီ ခွဲထိ ကျောက်ဖြူမြို့ ပရဟိတ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်သော ၎င်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ ကျောက်ဖြူမြို့မှ နိုင်ငံရေး သမားများ အပါအ၀င် လူပေါင်း ၂၀၀ နီးပါးခန့် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ကိုကိုကြီးမှ နောက်ဆုံး အပိတ် မိန်းခွန်း ပြောကြားရာတွင် တက်ရောက်လာသူများအား လူထု ယုံကြည်မူ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ယခုကဲ့သို့ ပြောဆိုသည်။
“ လူထု ယုံကြည်မူ ရအောင်သာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်တဲ့ သူတွေက ဒီ တက်ကြွတဲ့ လူငယ်တွေက အစ လူထု ယုံကြည်မူ ရအောင် ကြိုးစားပါ။ အဲဒါ အာဏာထက် ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိတယ်။ ပိုပြီးတော့ ထက်မြက်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
လူထု ချစ်ခင် ယုံကြည်မူ ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ချက်များကို သူက ယခုလို ထောက်ပြ ပြောဆိုသည်ဟု ဆိုသည်။
“ အဓိကတော့ ဒီထက် ပိုပြီး အလုပ် လုပ်ကြဖို့။ လူထုရဲ့ ယုံကြည် ကိုးစားမူရအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့။ ဒါ အခုနက ကျနော်တို့ မြို့တိုင်း မြို့တိုင်းမှာ တက်ကြွ လူပ်ရှားတဲ့ သူတွေ အားလုံကိုလည်း ထပ်ပြီး တိုက်တွန်းပါရစေ။ အကြံပြုပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ဘာအာဏာမှ မရှိပေမယ့် လို့ ရောက်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ကျနော်တို့ ကိုယ်အိမ်ကို ပြန်ရောက် သလို မျိုး သောင်းသောင်းဖြဖြ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း ကြိုဆိုကြတာကို မြင်ပီးတော့ တစ်ခါ တစ်ခါ ဆိုရင် ကျနော်ကိုယ်တိုင် မျက်ရည်လည်တယ်။ ပီတိ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါ အာဏာထက် ပိုပြီး တန်ခိုးရှိပါတယ်။ အဲသလို အခြေအနေမျိုးကို လူတိုင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွင် မဟုတ်ဘူး။ လူတိုင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျောက်ဖြူမှာ ကျောက်ဖြူလူငယ်တွေ၊ ရမ်းဗြဲမှာ ရမ်းးဗြဲက လူငယ် ခေါင်းဆောင်တွေ အဲသလို အခြေအနေမျိုးကို ကိုယ်ဟာကို လုပ်ယူလို့ရပါတယ်။ အဲဒါ အာဏာဆိုတာထက် တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ လူထု ချစ်ခင်မူ လေးစားမူ ယုံကြည်မူကို အားလုံး တည်ဆောက်လို့ ရပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
၎င်းပြင် ကိုကိုကြီးမှ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရခိုင်အမျိုးသားများ အကြားတွင် ညီညွတ်ရေး ရရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း တိုင်းရင်းသားများ ကြားထဲတွင် ညီညွှတ်ရေး လိုကြောင်း၊ သို့မှသာ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများကို ပူးပေါင်း ကျော်လွှားနိုင်သည့် အခြေအနေ တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသည်ဟု ဆိုသည်။
နောက်ပိုင်းတွင် ဦးကိုကိုကြီးမှ နိုင်ငံသားများ သက်ဆိုင်သော ကိစ္စကို ယခုလို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
“ ဖွဲ့စည်း အခြေခံ ဥပဒေအရ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုတာ အခု ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ အခု ဥပဒေနဲ့ ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ တိုင်းရဲ့ စံနုန်း တွေအရ နိုင်ငံသား အားလုံးဟာ တန်းတူ အခွင့်အရေး နိုင်ငံတော်ရဲ့ အကာအကွယ်ကို တန်းတူ ရယူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲဒါဟာ ဥပဒေအရ လက်ခံ ရမယ့် ကိစ္စ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံသားရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် နိုင်ငံသား အဖြစ် မှန်မှန်ကန်ကန် ရခဲ့တားလား။ မသမာနည်းတွေနဲ့ ရခဲ့တာလား။ ဒါက တပိုင်းပါ။ သို့သော် အစဉ်အလာနိုငံသား အဖြစ် ရရှိထား ပုဂ္ဂိုလ် အားလုံးဟာ ဥပဒေအရ တန်းတူ ညီတူ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်ဖြူ လူထု တွေ့ဆုံပွဲ ( ဓါတ်ပုံ- နိရဉ္စရာ)
ဒါကြောင့်မို့လို့ နိုင်ငံသားတွေကြားထဲမှာ ခွဲခြားပြီးတော့ ဥပဒေ ပြဌာန်းတာ၊ ဆက်ဆံ တာမျိုးဟာ တည်ဆဲ ဥပဒေ အရရော၊ နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေး စံချိန် စံညွှန်းအရ ရော အလေးအနက် ထားရမယ့် ကိစ္စ ဖြစ်တယ်” လို့ ပြောဆိုသွားသည်။
နယ်စပ် လုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီးလည်း မြန်မာ နယ်စပ် အခြေအနေများကို အန္ဒိယ၊ အမေရိကန်တို့နှင့် နိုင်းယှဉ်ပြောကြားသွားသည်ဟု သိရသည်။ ၎င်းပြင် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမကိုလည်း ဦးကိုကိုကြီးမှ ဂုဏ်ပြု ပြောကြား သွားကြောင်း သိရသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများနှင့် ကျောက်ဖြူ လုထု တွေ့ဆုံပွဲသို့ ဆရာတော်များ၊ နိုင်ငံရေး သမားများ၊ ကျောင်းသား လူငယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး မောင်တော ဆရာတော်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ပြည်နယ် လွှတ်တော် အမတ် ဦးတင်ဖေ၊ လူငယ် ခေါင်းဆောင် ကိုဗလတို့မှလည်း ပါဝင် တက်ရောက် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ဦးကိုကိုကြီး ဦးဆောင်သော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များသည် ရမ်းဗြဲ၊ မသီတာထွေး မိသားစု ရှိရာ ကျောက်နီမော် (သပြေချောင်း)၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် မဒေးကျွန်းသို့ သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။
သြဂတ်စ် ၄ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဦးကိုကိုကြီးနှင့် အဖွဲ့သည် ကျောက်ဖြူမှ ရန်ကုန်သို့အဲယား မန္တလေးဖြင့် ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားသည်ဟု သိရသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 19:340comments
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 19:100comments
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 19:080comments
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူ မြို့လယ်က ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ဦးစောအောင် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မြန်မာ့ဥယျာဉ် အမည်ရှိ အရောင်းဆိုင်ကို သောကြာနေ့ ညနေ (၅) နာရီလောက်က အကြမ်းဖက်သမားတွေ ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အကြမ်းဖက်သူ ( ၅၀) နီးပါးဟာ မြန်မာဥယျာဉ်ဆိုင်ရဲ့ အောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ စားသောက်ကုန် အရောင်းဆိုင်မှန်ကို ရိုက်ခွဲ ၀င်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပြီး ဆိုင်အတွင်းရှိသမျှ ပစ္စည်းတွေကို ရိုက်ခွဲဖျက်ဆီး သွားကြတယ်လို့ မြန်မာဥယျာဉ်ဆိုင်ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း တာဝန်ရှိသူ ဒေါ်ခင်ခင်စန်းအေးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
"မှန်တွေကို ခွဲပြီးသူတို့ အထဲကို ဝင်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ ကောင်တာရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး Air ticket ရောင်းတဲ့ ကောင်တာရှိပါတယ်။ ဒီ စတိုးရောင်းတဲ့ ကောင်တာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေအကုန်လုံး သူတို့ဖျက်ဆီးတယ်။ ကွန်ပြူတာတွေကိုလည်း ရိုက်ခွဲတယ်။ ရှိသမျှပစ္စည်း တစ်ဝက်ကျော်ကျော် လောက်က အကုန်လုံး ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်။ အတွင်းထဲတောင် ဝင်လို့မရဘူး။ ဝန်ထမ်းတွေကလည်းပဲ အပေါ်ကို သူတို့ကြောက်တော့ အကုန်လုံး ပြေးပြီး တနေရာမှာ သူတို့သွားပုန်းနေကြတာပေါ့"
အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးသူတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စာတန်းတံဆိပ်ပါ တီရှပ်တွေကို ၀တ်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကွာလာလမ်ပူမြို့ မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြပြီး အပြန်မှာ အဲဒီဆိုင်ကို ၀င်ရောက် ဖျက်ဆီးခဲ့တာ ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
အကြမ်းဖက်သူတွေထဲက (၈) ဦးကို မလေးရှားရဲက ဖမ်းဆီးမိထားပြီး လိုအပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 19:060comments
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 18:570comments
အနောက်ဂျားဗားရှိ သူ့ ရဲ့နေအိမ်မှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ သမ္မတ ယူဒိုယူနို က သူ့ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြေအနေကို တတ်နိုင်သမျှ မှန်မှန်ကန်ကန် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နဲ့ ဘက်မလိုက်ဘဲ ကြိုးစား ရှင်းပြနေတာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်၊
ရခိုင်- ရိုဟင်ဂျာ ပဋိပက္ခ ဟာ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ မဟုတ်ဘဲ ဒေသတွင်း လူုအုပ်စုကြား ဖြစ်ပွါးတဲ့ ပဋိပက္ခသာဖြစ်ပြီး အကြောင်း တိုက်ဆိုင်လို့ ရိုဟင်ဂျာ တွေက မူဆလင်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်နေတာသာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတ ကပြောပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဇာတိဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ မျိုးဆက် လေးဆက်လောက် နေထိုင်လာတဲ့ သူတို့ကို မြန်မာ အစိုးရက တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးထဲမှာ ထဲ့သွင်းမှု မရှိသေးဘူးလို့ လည်း ပြောပါတယ်။
ဒီပဋိပက္ခမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် ၂၈၀၀၀ ကနေ ၅၃၀၀၀ ထိ များပြားလါကြောင်း၊ စာရင်းအရ ရခိုင် ဒုက္ခသည် ၂၄၀၀၀ ရှိနေကြောင်း၊ ဝေဖန်သူတွေက မြန်မာအစိုးရ ဟာ ရခိုင်တွေကို ဦးစားပေး နေတယ်လို့ ဆိုကြပေမဲ့ တဖက်မှာလည်း ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ကုလသမဂ္ဂ ရဲ့ အကူအညီ အထောက်အပံ့ ပိုရနေတယ်လုို့ ရခိုင်တွေက သတိမူ သဘောပေါက် ထားကြောင်းလည်း ပြောဆိုပါတယ်၊
မြန်မာနိုင်ငံက ပြဿနာဖြေရှင်းရေး အတွက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနေနဲ့ သံတမန် လမ်းကြောင်းက တတ်နိုင်သမျှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ထံလည်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ရဲ့မျှော်လင့်မှုတွေ နဲ့ပတ်သက်လို့စာစောင်ပေးပို့မှာ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထောက်တွေကို ရှင်းပြသွားပါတယ်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 18:550comments
မနေ့တုန်းက ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်တော် မြို့နယ် အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဂုပ္ပီထောင့်နဲ့
အပေါက်ဝ ကျေးရွာတွေမှာ မီးရှို့မှု တွေဖြစ်ပွား ခဲ့ပါတယ်။
ဒီမီးရှို့မှု တွေ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ရွာခံ တဉီးက ဘီဘီစီကို ပြောပြရာမှာတော့ မြို့ပေါ်က
လူတွေက အဲဒီနေရာ တွေကို လိုက်လာ ခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်းနဲ့ လုံခြုံရေးတွေက
အဲဒီ လိုက်လာခဲ့ကြ သူတွေကို လူစုခွဲခဲ့ တဲ့အကြောင်း တွေကို ပြောပြသွားပါတယ်။
ကျောက်တော် မြို့နယ်ဟာ ရခိုင် အများစု နေထိုင်တဲ့ မြို့နယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်တော် မြို့နယ်မှာသာ မကဘဲ ကျောက်ဖြူ မြို့ဘက်မှာလည်း မီးရှို့ဖို့ ကြံစည်
သူတွေကို ဖမ်းမိတဲ့ အကြောင်း သတင်းရရှိ ပါတယ်။
ဘီဘီစီ - မြန်မာပိုင်း
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 18:540comments
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီ-ရိုဟင်ဂျာ အရေး ကိစ္စဟာ အင်မတန် နက်နဲ သိမ်မွေ့တဲ့ အတွက် လူ့အခွင့်အရေး ရှုထောင့် တစ်ဘက်တည်းက မကြည့်ဘဲ တိုင်းတစ်ပါး နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ကျူးကျော်မှု၊ နယ်စပ်ဒေသမှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်တဲ့ အစိုးရ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ အဂတိ လိုက်စားမှု ကိစ္စတွေကိုပါ ဘက်ပေါင်းစုံက ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ (၈၈) မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
88 Generation Student Group
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ "ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်များအတွက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ" ကို ရန်ကုန်မြို့ သင်္ဃန်းကျွန်းရှိ (၈၈) မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ ရုံးချုပ်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့က ပြုလုပ်နေစဉ်။
"ဒီကိစ္စမှာ လူ့အခွင့်အရေး ရှုထောင့် တစ်ဘက်တည်းက မကြည့်ဘဲ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ကျနော်တို့ တမျိုးသားလုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေ၊ ပြည်ပက ကျူးကျော် ၀င်ရောက်နေမှုတွေ၊ အဲဒီမှာလည်း မတရားသဖြင့် ဒီက အကျင့်ပျက်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကြောင့် တချိန်တုန်းက ၀င်ရောက်လာတဲ့သူ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ၀င်ရောက်လာသူတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားအတွက် နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ နဲ့ တိုင်းရင်းသားဆိုလည်း တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အခွင့်အရေးတွေ အားလုံး ခြုံပြီး ကြည့်ရပါမယ်။ "
ဒါအပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီး အခြေအနေမှန်တွေ ဖေါ်ထုတ်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာကင်တားနားရဲ့ တိုက်တွန်းချက် အပေါ် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့ရဲ့ သဘောထားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုယ်တိုင် သွားရောက် စုံစမ်း လေ့လာခဲ့တဲ့ မမီးမီးက အခုလို ပြောပါတယ်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 18:530comments
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 05:050comments
Peaceful Protests in front of UNHCR Office, Aug 3, 2012
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောကြားတဲ့ သဘောထားကို ထောက်ခံတဲ့ အနေနဲ့ ဒီကနေ့ သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးရှေ့မှာ လူငယ် အယောက် ၂၀ ခန့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါ လူငယ်တွေဟာ အင်တာနက် အွန်လိုင်းက တဆင့် facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားထားတဲ့ status တခုကနေ လာရောက်စုစည်းကာ အခုလို ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတဲ့ လူငယ်တွေဟာ ရိုဟင်ဂျာအရေး ပြောကြားသော သမ္မတကြီးအား ထောက်ခံပါသည်၊ ရိုဟင်ဂျာသည် တိုင်းရင်းသား မဟုတ်၊ ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်၊ လိမ်ညာဝါဒဖြန့် မီဒီယာများ ချက်ချင်းရပ်၊ ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားဟု ပြောသူများ အလိုမရှိ စတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေကို ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံတော်သီချင်းကို သီဆိုကာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ နေ့လယ် ၁ နာရီလောက်ကနေ စတင်ခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှာ တာဝန်ရှိသူ အာဏာပိုင်တွေက လာရောက်ဟန့်တားခဲ့ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး UNHCR မဟာမင်းကြီးက သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို ပြောကြားခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာများနဲ့ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေးကို ကြိုးစားပါ ဆိုတဲ့ စကားအပေါ် မကျေနပ်တဲ့ အတွက် ဒီမိုကရေစီရေး စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူငယ်တွေ စုပေါင်းပြီး အခုလို ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 04:570comments
ကုလ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် မောင်တောခရီးစဉ်တွင် တိုင်းရင်းသား ၂၀၀ ခန့်က ပိုစတာများကိုင်ပြီး ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်
ယနေ့နေ့လည် ၁ နာရီကျော်က မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်ရေး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တေးနား မောင်တောသို့ ကားများဖြင့် လှည့်ပတ် ကြည့်ရှ့စဉ် ရခိုင် တိုင်းရင်းသား ၂၀၀ ခန့်က ပိုစတာများ ကိုယ်စီ ကိုင်ဆောင်ပြီး ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
“ သူတို့က လူ့အခွင့်ရေး ကိုယ်စားလှယ် ကားတန်းနဲ့ မောင်တောမြို့ထဲကို လာရောက်ကြည့်ရှု့တဲ့ အခါ မြို့ထဲမှာ ပိုစတာတွေ ကိုယ်စီကိုင်ပြီး ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ လူပေါင်းက ၂၀၀ ခန့်ရှိပါမယ်။
ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က လာကြည့်တဲ့သူတွေကလည်း ၃၀၀- ၄၀၀ လောက်ရှိတာ ကို တွေ့ရပါတယ်။ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ကြတာပါ” ဟု လူမူရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေ သူ ကိုကျော်အေးမောင်က ပြောသည်။
ပိုစတာများထဲတွင် မြန်မာလို (၁) နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားပါ။ (၂) မြန်မာနိုင်ငံ ၏ အချုပ်အချာအာဏာကိုလေးစားပါ။ (၃) တိုင်းရင်းသားတို့၏ လူအခွင့် ရေးကို လေးစားပါ။(၄) မျှမျှတတ ဆက်ဆံပါ ဟု စာလုံးမဲများဖြင့် ရေးသားထားသည်ဟု သူက ပြောသည်။
“ ပိုစတာတွေကို ကိုယ်စီကိုင်ပြီး ငြိမ်းချမ်း သေ၀ပ်စွာနဲ့ ဆန္ဒ ထုတ်ဖေါ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လူတွေ ကလည်းနိုင်ငံတော်အလံကိုလည်း ကိုယ်စီကိုင်ထားကြပါတယ်။ ကားပေါ်က လူတွေက ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြပါတယ်။ လူတွေ အများကြီးပါဘဲ။ သူတို့ ( ကင်တားနားနဲ့ အဖွဲ့) ဒီလို ဆန္ဒတွေ ဖေါ်ထုတ်တယ် ဆိုတာကို သိသွားပါတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
လူ့အခွင့်ရေး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တေးနား အဖွဲ့သည် ပြည်သူများ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပွဲအား အသွား တစ်ကြိမ်၊ အပြန်တစ်ကြိမ် မြင်တွေ့သွားခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကားတန်းမှာ အလိုတော်ပြည့် ကျောင်းဘက်သို့ ဦးတည် သွားနေကြောင်း ကိုကျော်အေးမောင်က ပြောသည်။
(သတင်းပေးပို့ချိန် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်)
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 19:150comments
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 19:120comments
“သီတာထွေး” သို့ သွေးမော်ကွန်းနှင့် သွေးသစ္စာ
သွေးမော်ကွန်းနှင့် သွေးသစ္စာ စစ်တွေညိုသန့်
သြော်-------- မသတီစရာ အရေးကြောင့်
ကြားရသူဘို့၊ မျက်ရည်စို့ ---
ကြားရသူတိုင်း၊ ရင်မှာလှိုင်း ---
ကြားရသူတွေ၊ ဒေါသပွေ ---
သွေးဖြင့်ရေးပြ “ထွေး” နှမငယ်
စမ်းလို ချမ်းမြ ပါစေသတည်း။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 19:05 1 comments
﻿ ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ရှင်းလင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်ရပ်များက အခြားပြင်ပမှ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုနှင့် အားထုတ်မှုရှိသည်ကို သက်သေပြနေကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြား
ထို့နောက် နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာ့စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေးက ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်အချို့၏ အချိန်ကို ကြည့်ပါက တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း ဖြစ်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါဖြစ်ရပ်များက အခြားပြင်ပမှ လူများ၏ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်ကို ဦးတည်သည့် ပြင်ပမှ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုနှင့် အားထုတ်မှုရှိသည်ကို သက်သေပြနေကြောင်းဟု နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာ့စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဘင်္ဂါလီများ၏ မွေးဖွားနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ဘင်္ဂါလီ ဦးရွှေရောက်ဒူလာ မိသားစုအကြောင်းကို ဥပမာပေး ပြောကြားခဲ့ပြီး ဦးရွှေရောက်ဒူလာတွင် မိန်းမ လေးဦး၊ သားနှင့်သမီး ၂၈ ဦး၊ မြေးများ ၄၉ ဦး စုစုပေါင်း မိသားစုဝင် ၈၂ ဦး ရှိကြောင်းနှင့် မွေးဖွားနှုန်းကို ဖော်ပြရန် "စကားလုံး ရှာလို့ မရနိုင်ကြောင်း" ပြောကြားခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေကို ၎င်းက (၁) ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ထိခိုက်စေသည့် ဖြစ်ရပ်များ၊ (၂) မောင်တောမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဆူပူသောင်းကျန်းသော လူအုပ်ဖြစ်ရပ်များ၊ (၃) အစိုးရ၏ အရေးယူမှုနှင့် ကာကွယ်တား ဆီးရေး ဆောင်ရွက်မှုများ၊ (၄) စစ် တွေမြို့နှင့် အခြားမြို့များတွင် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဆူပူသောင်းကျန်းသော လူအုပ်ဖြစ်ရပ်များ၏ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်များ၊ (၅) ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှု ပြန်လည်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်၊ (၆) လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီပေးနိုင်ရေးလုပ်ဆောင်မှု၊ (၇) ကယ်ဆယ်ရေး၊ ပြန်လည်နေရာ ချထားရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်၊ (၈) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ (၉) သဟဇာတဖြစ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းသို့ စသည့် ခေါင်းစဉ်များခွဲ၍ ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့ရှင်းလင်းပြီး၌ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချ နေထိုင်သူ (ဘင်္ဂါလီများ) အတွက် ကြုံတွေ့နိုင်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေးက ရွှေ့ပြောင်း အခြေချနေထိုင်သူများ၏ လူဦးရေ အလွန်အမင်း တိုးမြင့်လာမှု၊ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ၊ ယဉ်ကျေးမှု ပဋိပက္ခ၊ လူမှုရေး ပဋိပက္ခ၊ မြေယာအသုံးပြုမှု ပဋိပက္ခ၊ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခ၊ ဆက်သွယ်သွားလာနိုင်မှု အကန့်အသတ် ရှိခြင်း၊ တင်းကျပ်သည့် ၀န်းကျင်၊ တင်းကျပ်သည့် ဈေးကွက်အခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရှားပါးမှု၊ ပညာရေး အဆင့်အတန်း နိမ့်ပါး၍ စာမတတ်မြောက်မှု၊ မဖွံ့ဖြိုးသည့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ စသည်တို့သည် ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများနှင့် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူ (ဘင်္ဂါလီများ) အတွက် ကြုံတွေ့နိုင်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖွယ် ရှိသည့် နည်းလမ်းများကိုလည်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးမှ ရှင်းလင်းပြောကြားနေစဉ်
တည်ငြိမ်မှုနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးမှုကို တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပင်ကိုစွမ်းရည်ရှိသော ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး၊ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ ပေါ်ပေါက်ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်း၊ ပဋိပက္ခကာကွယ်ရေး ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း နှစ်ရပ်လုံးအတွက် ရပ်ရွာအသိုင်းအ၀ိုင်း ဖွံ့ဖြိုးအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်သွားလာနိုင်မှု တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဒေသခံများ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ရပ်ရွာအသိုင်းအ၀ိုင်းကြား အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများ အားပေးခြင်း၊ ဈေးကွက် အခွင့်အလမ်း ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဈေးကွက်အခြေအနေများကို အားပေးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးကို အားပေးခြင်း၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကို တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် နည်းလမ်းများဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်၌ အဓိကရုဏ်းများကြောင့် ရခိုင်လူမျိုး ၃၁ ဦး၊ ဘင်္ဂါလီ ၄၆ ဦး စုစုပေါင်း ၇၇ဦး သေဆုံးပြီး ၁၁၂ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် စုစုပေါင်း လူနေအိမ် ၄၈၂၂ လုံး၊ ဗလီ ၁၇ လုံး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၁၄ လုံးနှင့် စာသင်ကျောင်း သုံးကျောင်း မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
ထို့ပြင် အဓိကရုဏ်များကြောင့် လက်ရှိဒုက္ခသည် ဦးရေမှာ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ရခိုင်လူမျိုး ၈၀၃၁ ဦး၊ ဘင်္ဂါလီ ၅၃၃၉၀ ဦး စုစုပေါင်း ၆၁၄၂၁ ဦး ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်လူမျိုး ၈၀၃၁ ဦးအနက် ၅၇၀၂ ဦးမှာ စစ်တွေရှိ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ၄၃ ခုတွင် ရှိပြီး ၂၃၂၉ ဦးမှာ မောင်တောရှိ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်း ခြောက်ခုတွင်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဘင်္ဂါလီ ၅၃၃၉၀ ဦးမှာ စစ်တွေရှိ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများတွင် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အဓိကရုဏ်များနှင့် ဆက်စပ်ပြီး UNHCRE မှ ငါး ဦး၊ WFP မှ တစ်ဦး၊ AZG မှ လေးဦးအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားကြောင်းနှင့် အဓိကရုဏ်းတွင် မပါဝင်သည်ကို တွေ့ရှိရသည့်အတွက် တစ်ဦးကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံအမတ်ကြီးက ရိုဟင်ဂျာများသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများထဲတွင် ပါဝင်မှု ရှိ၊ မရှိနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းရာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက "ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ကျွန်တော်တို့လူမျိုး မဟုတ်ပါဘူးလို့ သမ္မတကြီးက ပြောတဲ့စကားကို ကျွန်တော် ထောက်ခံပြောကြား လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၈၂၄ ပထမ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီအောက် ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းတွေအတွက်၊ ကာယလုပ်ငန်းတွေအတွက် လိုအပ်ချက် ရှိလာတဲ့အခါမှာ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို အတားအဆီးမဲ့ ၀င်လာခဲ့တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဗြိတိသျှလက်ထက်မှာရှိခဲ့တဲ့ အစိုးရ ပြန်တမ်းတွေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ ၁၉၇၃ ခုနှစ်က ကောက်ခဲ့တဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်က ကောက်ခဲ့တဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းတွေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့မှာ ဘယ်တုန်းကမှ လူမျိုးခွဲခြားမှုထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကို တရားဝင် ဖော်ပြထားတယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးသာ ဖော်ပြထားတာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ တရားဝင် လူမျိုးစုကြီး ရှစ်စု ရှိပါတယ်။ ချင်း၊ ကရင်၊ ကချင်၊ ကယား၊ မွန်၊ မြန်မာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး လူမျိုးစု ၁၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ အဲဒီဟာတွေက တရားဝင် လူမျိုးစုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာကော၊ ဗြိတိသျှ အစိုးရ ပြန်တမ်းမှာရော ၁၉၇၃ ခုနှစ်က ကောက်ခဲ့တဲ့ သန်းခေါင်စာရင်း၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်က ကောက်ခဲ့တဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းတွေမှာရော ဘယ်တုန်းကမှ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ရိုဟင်ဂျာသည် ကျွန်တော်တို့လူမျိုးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့လူမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ မရှိပါဘူးလို့ ဖြေကြားချင်ပါတယ်" ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါရှင်းလင်းပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးတာဝန်ခံများ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အိုင်အင်န်ဂျီအိုများမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရောက်ရှိနေသော မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် Tomas Ojea Quintana လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကာ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိမိအနေဖြင့် သေချာလေ့လာဆန်းစစ် သွားမည်ဖြစ်ပြီး မိမိခရီးစဉ်အပြီးတွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 22:280comments
Extreme condemnation of Bangkok Post's editorial about Myanmar
An editorial was found in the July 20th edition of the Bangkok Post,aBangkok based newspaper published in English, that strongly criticized Myanmar and President U Thein Sein. The editorial is likely to beabitter denunciation of Myanmar written on behalf of Thai citizens and government officials who are worried about the international community predicting that Myanmar will become the new Asian tiger following its democratic reforms, and of some Bangkok-based international organizations that are spending millions of dollars on projects in Myanmar.
Not only is the Bangkok Post's account of President U Thein Sein's cancellation of two Thai trips prior to his recent visit biased, but it also damages the relations between two long-standing oppositions working together on the country's move towards democracy. According to the account, the reason behind the President postponing the trip to Thailand was that popular opposition leader Daw Aung San Su Kyi receivedawarm invitation to address the World Economic Forum on East Asia in Bangkok. The Bangkok Post can note that this information will serve to createamisunderstanding between the President and Daw Aung San Suu Kyi, who have reachedacertain level of understanding after their face-to-face discussion.
Historical records show that Thailand has exploited instabilities in certain countries to further the country's economic aims. The Vietnam and Korean Wars, the Cambodian Civil War, the half-century long civil war in Myanmar, and the weaknesses of Burmese dictatorship are the factors that have enabled Thailand to be the country it is today.
Thailand is especially worried that the country's interests, which stem from Myanmar's past problems, will be reduced by the democratization and development of present day Myanmar. For instance, Thailand is the center of the branches of Western non-governmental organizations, humanitarian organizations, foreign-based Myanmar organizations, foreign-based Myanmar media groups, and local and foreign non-governmental organzations, which were founded on the basis of Myanmar's human rights abuses, civil war, political issues, and environmental problems in the past 20 years. The expenditures of those branches and Thai-based non-governmental organizations enter Myanmar and the Thai market via the banks in Thailand.
At the same time, Thailand greatly benefits from the low income of Myanmar immigrant workers, both official and unofficial, in Thailand, the right to oppress them to any extent, and the low production costs of Thai factories and marine projects.
The Bangkok Post asserts that Thailand and its neighbours are well aware of the Rohingya conflict and that the Thai authorities will not accept immigrant Rohingyas for they view the ethnic group asaproblem of Myanmar, showing that the newspaper has no precise knowledge of the history of Rohingya, Myanmar, Bengladesh, and Rakhine State. This also proves that the Bangkok Post is trying to point out the mistakes of the former Burmese government and that it is simply echoing the voices of the Western media, who have been spreading propaganda about the Rohingya conflict. Therefore, the Voice Weekly views the editorial asapersonal insult on President U Thein Sein for implementing democratic reforms after having beenaproponent of the old authoritarian government. The Bangkok Post, which claims itself to beadignified publication, has never been in Myanmar, attended ASEAN summits, or officially interviewed the Myanmar President. Even the Washington Post of the United States, the Suddeutsche Zeitung of Germany, Channel NewsAsia of Singapore, have heldaface-to-face interview with President U Thein Sein. Therefore, as the Bangkok Post has never conversed with the President, the newspaper's portrayal of religious violence on the basis of the Rohingya conflict can be seen as an inadequate criticism.
As the Bangkok Post uses subjective reasoning (without studying the history of Rakhine State and investigating the ongoing events in the region), to condemn the Myanmar President, it seems more likeamedia spreading propaganda thanaprofessional media.
The Bangkok Post, which accuses President U Thein Sein's claim regarding the Rohingyas of being influenced by nationalism and ethnic hatred, should be questioned why it has always remained silent about the Thai authorities and media, Human Rights Watch, and the United Nations Commission on Human Rights neglecting such issues as Thai films on the historical background of Myanmar and Thailand, Thai newspaper coverage of the historical conquest of Thailand by Burmese Kings (which serves to promote Thai nationalism and animosity towards Burmese), the discrimination of Thai police, gangs, and citizens against immigrant Burmese workers (including blackmail, murder, and robbery), and the rape and trafficking of Burmese women to Malaysia and fishing industries. It is also questionable why the Bangkok Post emphasizes the affairs of Cambodia, Myanmar, and other countries who recently had border conflicts with Thailand, yet barely mentions such local topics as the long-standing tension and killings between Buddhists and Muslims who want to set upaseparate Islamic state in Southern Thailand, the Thai military's violence during Thaksin's reign, and the Thai army's repression of 'red shirt' protestors.
Everyone needs to note that as the Bangkok Post has givenabiased account of the easing Rakhine conflict, the newspaper will be held absolutely responsible should any dispute or misunderstanding revive between Myanmar's ethnic nationalities and between the Muslims and Buddhist Rakhines, who have been living in peace with each other for years.
Written by Editor (25.7.2012)
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 03:570comments
ထိုသို့ သတ်မှတ်ရခြင်း အကြောင်းမှာ ပြည်ပမှ တိုက်ခံနေသော အဖွဲ့ အစည်း၊ ပါလီမန်များ၏ ပြောဆိုမှုများသည် ခိုင်မာမှုမရှိခြင်း၊ ထုတ်ပြန်နေသော သတင်းများ မှားယွင်းနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟုရခိုင်တိုင်းရင်းသားတိုးတက်ရေးပါတီ (RNDP) က ဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒါဒို့ နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးကိုအသွင်ပြောင်းအောင်လုပ်တာပါ။ ရိုပာင်ဂျာ ပြဿနာကိုလည်းပိုမိုကြီးထွားလာနိုင်ပါတယ်။ အမှန်ကကျွန်တော်တို့က အစော်ကားခံနေရတာပါ”ပာု RNDP ပါတီက ရခိုင် တိုင်းရင်းသား တစ်ဦးဖြစ်သူ
ဘင်္ဂလီအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ့တပ်မတော်လက်အောက်တွင်ရခိုင်တိုင်ရင်းသားများနှင့် တပ်မတော်က ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် RNDPပါတီမှ နိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ တင်ပြထားပြီးဖြစ်သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရှိတာလီဘန်များကလည်း Tehreek-e-TalibanPakistan (TTP) အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သောရိုဟင်ဂျာအရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုများပါဝင်သည့် ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ကို ဇူလိုင်လ (၂၆)ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများဖြက်တောက်ရန်ဖိအား
ပေးထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျိူးစီးပွားများအားဖျက်စီးမည်ပာု ပါဝင်ရေးသားထားသည်။
ထိုသို့ ပြည်ပအဖွဲအစည်းများ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ပတ်သတ်၍မြန်မာ-မွတ်စလင်လူမျိုးဖြစ်သော၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေးကယခုကဲ့သို့ သုံးသပ်ခဲ့သည်။
“ကျွန်တော့်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်မှုတွေပာာ ပြည်တွင်းမှာ ဘင်္ဂလီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့ သူတွေအတွက်လည်း အကျိုးမပြုပါဘူး။”ပာုပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် ယခင်က မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့သွားရောက်ခိုလုံနေသောမြန်မာနိုင်ငံရေသမားပောာင်း အချို့ကလည်းရိုပာင်ဂျာအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သွေးထိုးလှုံဆော်မှုများလည်းပြုလုပ်လာကြကြောင်း ရခိုင်တိုးတက်ရေးပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့သေးသည်။
“အခုဖြစ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီလူမျိုးအရေးပာာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အရေးပါ။ အစိုးရကို
အဆိုပါပြည်ပနိုင်ငံများမှ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများ၏ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုများကို မန္တလေးမှဘင်္ဂလီအရေးအားလေ့လာ သူ မြန်မာ-မွတ်စလင်လူမျိုး တစ်ဦးကလည်း နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ဘင်္ဂလီလူမျိူး များဘက်မှသတင်းထုတ်ပြန်မှုအပိုင်းတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအားနည်းနေသဖြင့်အခြားနိုင်ငံမှ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဖိနှိပ်ချုပ် ချယ်မှုများကိုအများဆုံခံရဖွယ်ရှိနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်ဝေဖန် ပြောဆိုသည်။
“လူမျိုးရေးကိုအကြောင်းပြပြီး ဘာသာရေးကို ထိပါးလာရင်တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ မွတ်စလင်တွေက ငြိမ်ခံမှာ မပာုတ်ပါဘူး။” ပာုအစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူ မြန်မာလူမျိုးတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အစ္စလာမ်မစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (OIC)၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ်Ekmeleddin Ihsanoglu ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မူဆလင်များအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများအား အဆုံးသတ်ရန်အတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာဘန်ကီမွန်းတို့မှ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးပါရန်ဇူလိုင်လ (၂၅)ရက်နေ့က ၎င်းတို့ထံသို့ စာရေးသားတောင်းဆိုခဲ့သည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 02:560comments
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 02:380comments
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 00:030comments
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 20:020comments
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 19:590comments
သွေးမော်ကွန်းနှင့် သွေးသစ္စာ စစ်တွေညိုသန့် (၁) သြော်-------- မသတီစရာ အရေးကြောင့် မဟီကမ္ဘာဆွေးပြီး မှီစရာ ဝေးခဲ့ရရှာတဲ့ “သီတာထွေး” ရေ----...
ရခိုင်"ကူတောင်"မှာ "ပျောက်ဆုံးသူတွေရဲ့ အလောင်း"တွေပြန်တွေ့ပြီ
by စနေမင်း မဟာနွယ် on Friday, 22 June 2012 at 22:48 · ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့က ရခိုင်၁၀ ဦးနဲ့ ရ...
လက်နက်အပြည့်အစုံတပ်ဆင်ထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အင်အား ၁၈၀ ခန့်နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ရခိုင်- ဘင်္ဂလားနယ်စပ်မှာ ဒီနေ့ဖြစ်ပွားနေ
လက်နက်အပြည့်အစုံတပ်ဆင်ထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အင်အား ၁၈၀ ခန့်နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ရခိုင်- ဘင်္ဂလားနယ်စပ်မှာ ဒီနေ့ဖြစ်ပွားနေတ...
In nowadays people are posting pictures with captions like Mus...
The Gloomy days of Sittwe part-1(photo-news)
Won Thar Nu photo-AP Eleven Medai Group Security forces preventing Bengalis who are burni...
Bengali-Muslims’ Mujahid Insurgency (1948-1954) (This is the direct translation of part of the book Civil Insurgency In Burma .) Armed...
ဧရာဝတီ စစ်တွေမြို့တွင် မီးလောင်ကျွမ်းထားသည့် ရပ်ကွက်တခု (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ) ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက် အောင်ထွန်းဦးလမ်းတ...
ရခိုင် ၁၀ ဦးသတ်သူ အကြမ်းဖက်သမား တစ်ရာကျော်ကို စစ်တွေထောင်သို့ပို့
ရသေ့တောင်မြို့နယ်ရှိ အနောက်ပြင် ရွာတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ဆယ်ဦးသတ်မှုတို့တွင် ပါဝင်သူအကြမ်းဖက်သမား တစ်ရာကျော်ကို ဖမ်းဆီြး...
ဟင် အင်'s စစ်တွေ အစိုးရနည်းပညာတက္ကသိုလ်(GTC) ကျောင်းဆရာမများစီနှင်းလိုက်ပါလာသော ကားကို ဘင်္ဂလီကုလားများမှ တိုက်ခိုက် --------------------...
by Myanmar Tandawsint on Friday, 22 June 2012 at 00:59 · မောင်တောမှာက တပ်ရယ်၊ ရဲရယ်၊ လ၀က ရယ်၊ ကာစတန်ရယ်လေးဖွဲ့ရှိတယ်။ အဓိက အုပ်ချုပ်ရေး၊...
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012 . All Rights Reserved